Rooi-Els, Western Cape, iNingizimu Afrika
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Melanie
U-Melanie uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-92% wezivakashi zakamuva.
I-Rustic, indawo yokulala engu-3 yolwandle ezenzela ukudla endaweni ephephile futhi eseceleni engaphansi kohambo lwehora ukusuka eKapa.
Leli khaya lamaholide eliwubukhazikhazi nelisanda kulungiswa endaweni yamaholide elisogwini e-Rooiels linikeza indawo yokuziphekela izivakashi ezingafika ku-6. Ikhishi elihlome ngokuphelele, ama-BBQ`s angaphakathi nangaphandle enza leli khaya libe indawo efanelekile yeholide lomndeni eduze nolwandle.
I-Op-i-c, ehunyushwa ngokuqondile ngokuthi "On-the Sea" ibe semndenini wethu kusukela ngo-1969, lapho umkhulu wami kanye nentatheli edumile, uSkakel Kriek eyithenga kanye nezinye iziza ezintathu.
Ifa lika-Skakel, enye yezintatheli zokuqala ezaxoxa no-Nelson Mandela ngo-1972, lihlala endlini enomlando omibalabala, egcwele izinkumbulo zemibuthano emikhulu kaKhisimusi kanye nezingxoxo zasebusuku.
Ilungele iholide lomndeni noma kungani ungezi futhi ujabulele ikhefu elifushane lothando kude nezingcindezi zokuphila kwansuku zonke.
Idolobhana elihle lase-Rooiels liseduze ne-Kogelberg Biosphere Reserve, indawo enobuhle bemvelo kanye nezinhlobonhlobo zezimbali kangangokuthi i-UNESCO iqashelwa njengenye yezindawo ezishisa kakhulu ezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo emhlabeni. I-Scenery iyahlukahluka kusukela ogwini olunamadwala ukuya emabhishi ahlanzekile amhlophe kanye nokushona kwelanga okumangalisayo phezu kwe-False Bay, indawo yangempela yababukeli bezinyoni kanye nekhaya lesikhashana lokuvakashela i-Southern Right Whales kusukela ngo-Agasti kuya kuNovemba.
4.79(29 okushiwo abanye)
I-Rooiels iyidolobhana elincane elingasogwini lolwandle, elidume ngemibono yalo emihle nge-False Bay. I-Rooiels iyingxenye ye-Kogelberg Biosphere Reserve, okuwukuphela kwe-Biosphere eNingizimu Afrika ezomenyezelwa yiNhlangano Yezemfundo, Isayensi Nezamasiko yeNhlangano Yezizwe Ezihlangene (i-UNESCO). Itholakala eduze kweClarence Drive Route, eyaziwa njengendawo ehamba phambili yokushayela olwandle emhlabeni, iRooiels iyidolobhana lokuqala elibhekwa ogwini kuze kufike ePringle Bay, Betty's Bay naseKleinmond. Lawa madolobha amane ajwayele ukubizwa ngokuthi indawo yaseHangklip - Kleinmond.
Uma ungumbukeli wezinyoni oshisekayo noma umthwebuli wezithombe zezilwane zasendle lena indawo ongaba kuyo: Lena indawo engafinyeleleka kalula eduze kweKapa ye-Cape Rockjumper yodumo, igama elenza kahle izithombe zezilwane ezigxuma amatshe.
I-Rooiels iyindawo eyintandokazi yama-angling kanye ne-shellfish diving, enezinhlobonhlobo zezitshalo zasolwandle ezicebile ngasogwini lwayo. Sicela wazi ukuthi imvume iyadingeka ukuze kuvunwe NOMA YILUPHI uhlobo lwasolwandle. Ibhishi elingangcolisiwe laseRooiels linikeza ukubhukuda okuphephile kuwo wonke amalungu omndeni.
Melanie has taken over from Elsabe and will be running the show for a while. This is due to a number of personal and medical issues. We will as always give you same standard of customer care as Elsabe did.
Sihlala imizuzu engu-45 kuphela e-Somerset-West ngakho-ke singathanda ukuhlangana nawe futhi sikubingelele lapho ufika. Singatholakala futhi uma kukhona izinkinga ngesakhiwo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Rooi-Els namaphethelo